Intee in le'eg ayaad u taqaanaa Cunnooyinka Taayirada? Qaado kediska oo ogow - Cunnada Taayirada
Sideed u ogtahay Cunnada Lugaha? Qaado kediska oo soo hel
Ku dhowaad qof walbaa wuu garanayaa Cuntada Lugaha Lugta. Fursadaha aad leedahay ma ogtahay qof ama keenay ama helay cunto. In kasta oo dadka badankood ogyihiin in Cunnooyinka Lugaha la dhigto ay jiraan, waxaan maqalnaa dhowr fikradood oo khaldan oo ku saabsan waxa Cuntada Lugaha iyo sida barnaamijku u shaqeeyo.
Taasi waa sababta aan ugu faraxsanahay in daawadayaashu ay gudaha ku eegi doonaan habka gudbinta cuntada ee socda Magaalooyinka Mataanaha ah ee Tooska ah (KSTP / Channel 5) 3-4 pm Khamiista, Maarso 27. Inta aan mowduuca ku jirno, qaado kediska soo socda si aad u tijaabiso aqoontaada ku saabsan Cuntooyinka Lugaha Lugta. Jawaabaha waxaad kaheli doontaa hoosta sawirada cuntada dhabta ah ee cuntada Wheels.
1. Cuntada Lugaha waxaa lagu diyaariyaa jikooyin maxalli ah oo ay soo diyaariyaan xirfadlayaal cunto-kariyeyaal ruqsad haysta
2. Waa inaad da 'weyn tahay si aad u hesho Cunnada Lugaha Lugta.
3. Haddii aad iska diiwaangeliso Cuntada Lugaha, waxaad heli kartaa oo keliya maalin kasta, Isniinta ilaa Jimcaha.
4. Waad heli kartaa cuntooyin ku meel gaar ah, xitaa hal toddobaad oo keliya.
5. Cuntooyinka Lugaha Lugta waxaa heli kara oo keliya kuwa aan awoodin inay iyagu wax karsadaan.
6. Cuntada Lugaha Laydhka waa urur diimeed.
2. Been. Cunnooyinka ayaa diyaar u ah qof kasta oo caqabado kala kulma diyaarinta cunto caafimaad leh, nafaqo leh si joogto ah. Tan waxaa ka mid ah dadka waaweyn ee leh naafonimo ku meel gaar ah ama joogto ah.
3. Been. Qaatayaashu waxay dooran karaan inay helaan cunnooyin maalmaha qaarkood ee usbuuca, ama waxay heli karaan cunnooyin qabow oo la keenay toddobaadkii hal mar.
5. Been. Ma jiraan wax shuruud ah oo dakhli looga baahan yahay helitaanka cuntada. Barnaamijyo ayaa la heli karaa si loo caawiyo kuwa la kulma caqabadaha xagga kharashaadka qiimaha cuntada.
6. Been, in kasta oo ururro diimeedyo badani ay taageeraan hawsha barnaamijyada Cunnada ee Wheels siyaabo kala duwan. Ku xirnaanta diintaada wax raad ah kuma lahan kartidaada inaad ku hesho Cunnada Taayirada.